MUUQAAL: Jaaliyadda Puntland ee UK “Waxa aanu Taageersanahay Xoraynta Gobolada ka Maqan Puntland” (Daawo) | KALSHAALE
MUUQAAL: Jaaliyadda Puntland ee UK “Waxa aanu Taageersanahay Xoraynta Gobolada ka Maqan Puntland” (Daawo)
Jun 11, 2018 - 20 Aragtiyood
London ( Kalshaale ) Jaaliyadda kasoo jeeda deegaanada Puntland ee ku dhaqan dalka Ingiriiska ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada London waxay Taageero ugu muujiyeen Ciidamada Puntland, oo Xiisad dagaal ay kala dhaxaysa kuwa Somaliland.
“Waxaan si buuxda u taageersanahay, Mowqifka Puntland ay kula soo Noqonayso Gobolada maqan, waxaana diyaar u nahay Waxkasta, oo Waanu idin garab taaganahay. “
Puntland iyo Somaliland oo dagaal dhowaan ku dhexmaray deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool ayaa Maalmihii ugu dambeeyay Waday Gurmado kala duwan ay samaynayaan, Waxaana sidoo kale Qayb ka ah Arintaasi Taakulada loo gaynayo labada Ciidan.
Qaramada Midoobay iyo Madaxda Dawladda Soomaaliya ayaa labada dhinac ugu baaqay inay Is Xakameeyaan, oo Miiska Nabadda la isugu yimaado.
Prof Dagaal qamanqaabin ma aragteen
Oo Qurbaha joogo ma aragteen
Oo Ciyaalkiisi soo xambaarey ma aragteen
Oo sida xoolaha ilaalin ma aragteen
Oo caruur dadkale dabka saari ma aragteen
– Video haddii la tarjumo oo loo geeyo MI5 waa xaqiiq inuu jebiyey axdiga lagu siiyey dhalashada ee ah
– Waligaa maka qeybqaadatey dagaalo sokeeye (maya)
– Waligaa maka qeybqaadatey -abaabul dagaalo sokeeye (maya)
– Waligaa maka qeybqaadatey Fundraising dagaalo sokeeye (maya)
War ninka Video haloo geeyo dowladda UK ayagaa tarjuman, waliba hadda uma baahnid qof soomaali ah Computer baari ayaa joogo.
Waad xujowday ee xaal bixi hada ma waxaad ku
ku baaqday jaaliyad dhan oo soomaaliyeed in la xir
Xiro oo la laayo
Haday dadkaa wax gaaran adaa masuul ka ah
Waxaad dirtay fariin halisteeda leh
Waqti badan ayaa Majeerteen iyo Puntland ku marmarsiiyoodeen Dhulbahante ayaa Somaliland wata oo hadaan u dagaalama damacno dhabarka naga toogan!
Maanta Dhulbahante waa mid xabaddooda Waqooyi u jeediyey, Yoocada warkeeda dhamaa, hadda waxa laga hadlayaa Labida Gaatama! Meel ku taalo ma aqaan.
In xaal xun yahay waxaan ku gartay Faysal oo caruur School dhigata Boorama u hanjabay iyo Hartigii Hargeysa joogey oo qaxaya tartiib tartiib.
Horgaladii sida Cali Khaliif iyo Garaado horgale ahaa oo afkii juuqda gabay.
Dagaal xitaa looma bashna.
Taleex, Boocame, Xudun calanka Puntland surteen dadkii lahaa oo Tukaraq ka shisheeya..
Laaska ayaa lagu socdaa..
Somaliland Somali wax la qaybsada oo villa Somalia shuruud geysta, waa hubaa in la idiin yeelin waxa rabtaan oo dal gooni nahay ahayn.
Madaxweyne, Caasumad, parleman bar, Xukuumadda bar iyo wixii kale dalbataan dalbada, oo la idin kala xaajoon karo.
Xuduud Egriis raggii awoowayaashood u dhinteen kaalaya qaata idinka yeelimayaan xitaa Lacag ku laaluushtaan.. That idea going nowhere.
Sometimes xishoodku waaa qaali, inaad iska aamustaa way dhib yartahay…silent is a golden…speech is a silver!!
Anyway..DAARODKII wuxu qaadayaa Sanadkaan.
“GACMA AAN SARE U TAAGTAY GARGAAR WAYDIISTAY EEBE!!
Somali waa beelo, cidda wax isku darsato rabta hala soo dhaweeyo, cidda israbin yaan la isku qasbin waana sida keliya oo Somali dhiigeeda lagu kala badbaadin karo.
Maanta waqtiga lagu jiro u malayn maayo in cidna xoog lagu xukumi karo.
Xuduud in Engiriis iyo wadan lakala jaro ma jirayo hadaan la isku raacin oo xitaa reer Xamar ogolaan.
Haddii Reer Laascaanood surtaan Calanka doonaan nina xoog kuma maquunin karo.
Dhiig Somali inta laga maadan karo ha laga maagto.
Mar haddii Harti isku raacay in Isaaq laga yeelin calan, Lacag iyo Passaport gooni ah oo dalkale noqdaan waa howl kale, laakiin kuma qasbi karaan tooda, wixii dhaafa waa in dhiig la iska keeno.
Weligeyna waan ogaa in tan imaandoonto.
It does not make sence waxa SSC Ka socday, bahdil Harti.com 🤕
Waxaan dhoowr jeer arkay ado kusoo celcelinayaa dhulbahante nagaso horjeeda oo Somaliland tageersan baan diidanahay inaan isku dhimano…hadaba waxoogaa aan kuu yara xado sirta …raga front..or furinta joogaa waaa ISACK sooc ah..waaa ORIGINAL kii isaaqaa.
Dhulbahntaha la qarameeyo waxaan u dirnaa Awdal & Selal..kastanka Lowyacado ee Djibouti raga joogaa waaa WAROOS & DHULOOS!
Walaahi xayraan baa tahay..kkkkkkll
War dagaal cidna kaagama futa xuma, orod carro Iidoor ku noqo, dadka u hanjabayso waxay xeerinayaan.
1. Derisnimo iyo Somalinimo
2. Iidoorka awal didsanayeen oo eed sheeganayeen yaan lasii didin oo hala tuso in cidna qabiil ahaan u necbayn. Kacaankii dadka waa wada dilay.
3. Waqti Somali civil dib loogu celiyo lama joogo.
Hadda waala xowla soo dhaafteen oo Garoowe soo dhul degteen sidaad maalinba tuulo usoo qabsanayseen oo dagaal looga cararayey.
Hadaad aaminsan tahay, Darood gacmaha sare u taagay oo adoomin karto.. Bilaha soo socda fiirso.
Walaahi in Burco ka sokeynayn.
Goorma ayaa Isaaq ka adkaaday Harti.
Waxaa la sugayey Dhulbahannte oo xabadda iga jeediya, waana timid.
Meeshaad SSC ka joogilahayd hala arko.
KKK adiga oo daarood ah baa halkan kanyidhaahda dhulbahante dhabarka ayuu naga toogtayee ma aniga oo IDOOR ah baaku aaminayaa furinta ama jiidaaa DAGAALKAA EE SOMALIA?!
GOD BLESS SOMALILAND 👈🏿👈🏿💪🏿💪🏿
Hello Tukaraq Tell me how you doing today😊 👈🏿🤘🏿🤣🤣
Ogow cidna kama siyaasad iyo ciidan badnin.
Hadday Isaaq keliya joogaan carro Dhulbahante waa sahal in la laayo, waayo degaanka kalsooni kuma qabo oo naagta shaaha ka gada ka baqin in shirqoolayso..
Nin dismoral ah oo gadaal, dhinacyada iyo hore iska fiirinaya, dal ma shiciyo, waa inta xabadda ka bilaabanayso kadibna boqo ku aynfaadin, adiga ayuu kaa dheerayn xagga orodka.kkkkkkkkl.
Waxaa rajo fiicnayd in Dhuloos loo diro Dhuloos kale.
Ma caruur baad u sheekayn Isaaq jooga Laaska oo Dhulbahante dagaal u socda jilibka u dhigin ayaa Laaska sii joogin..kkkkkkkl
Car garoowe kaalayaa bay maraysaa xaajaduye bal aan dhoowrno!👈🏿
Rajada ugu waxay ahayd oo Somaliland SSC kusii joogi karto waxay ahayd in Dhuloos horgale ah loo diro Dhuloos iyo Dhabayaco dagaal kusoo talo galay oo wada socda. Kkkkkkkkk
Intay kusoo gaarin ayaa ciyaalka iyo dumarka kaa bursan Tuulo kasta.
Riyo wadaa, Isaaq keliya ayaa Sool difaacaya kuye.
Reer Magaalka iyo aqoonyahanadu waa kuwii ka dagaalamo DAAHA gadaashiisa, waligey ma arkin Prof banaanka isa soo dhigaa oo dagaal iclaamin.
War duqa u sheega inaan la keenin meelaha lagu abaabulo dagaalka ee hala geeyo shirarka qarsoon.
Wixii xaal ah waa bixis sxb
dabshid. Miyadan ogayn waqtigii jubaland la xoraynayey
Wixii dhacay war nnyoow dal soomaaliyeed baa la
Xoreynayaye qaldaanka hanagu far fiiqin yey odayada garuun ku boobine
John Bolton maxaad isku tahiin?!
Daaroodku waxay kasoo jeedaan qoomiyado kale oo dhulka Soomaalyeed aan shaqo ku lahayn baan filayaa.
Waa in Canser kaaa laga qabtaa!!
Balan waxaan ku qaadayaa in ISAAQU idiin soo jeesto wuu iska qayilayaayee..iga walee in ilaahay yaab idiin keeni.
Soda laydiin waso ISAAQA ayaa yaqan oo ku dhashay!!
sOmalilander iku sheex Reer banu Isaaq MA AHA sidii Qowmu Luude. WBT.
Assalaamu calayku Ramadaan kariim.
Balanbaalis Garqaad wuxuu yiri oon ku raacsanahay; “Dhulbahantaha ku xeeran aaminsan Puntland meysan fahmin hadalka Mr Gaas Laakiin marka lasii ruugo wuxuu noqonaya “Dhulbahante masuuliyad ma qaadi karo oo laguma aamini karo woxooda ee waa in aan anigu u qayshaa” ➕Anigu waxaan ku darsaday; ummad waxay jirta Markay; talo, towfiiq & kala dambayn leedahay YAAB waxaa ah Beeshi Somali ugu taariikh wanaagsanayd inuu faracoodi maanta u beretamo AMA Isaaq ii geeya AMA Majeerteen ii geeya BAL waa ciddee CIDDA saa uga muruq weyn ee ay saa uga cabsan?. Balse Farxiyoy GABLAN ma tihidiin oo waxaa idiin jooga 2BA legde & kooxdiisa aad deyriseen Guushuna ayyagay raaci INSHÀ-ALLAAH sababtoo ah Moowqifkooda aad garawayseen WAA; Khaatumo State & SNM oo heshiiya dabadeedna reer Koofur la xisaabtama. MARKAAN waa haddii laga helo Muuse Biixi saa caqligi waxaa la tegay SIILAANYE. ILAAHOW sidii roon. WBT
meeshan waa lagu xiiqay hora loyiri hadal haan mabuuxsho